Manufacturing Archives - Page 44 of 46 - The Source
Zimglass seeks $36 mln working capital
GWERU, October 16 (The Source) – The Industrial Development Corporation of Zimbabwe’s glass manufacturing unit is seeking $36 million in working capital, an official said on Wednesday. Zimbabwe Glass Industries (Zimglass) last week resumed production of flint glass, its cash cow in recent years, but… Read More
SA minister calls for business partnerships
HARARE, October 15 (The Source)– South Africa Trade and Industry deputy minister Elizabeth Thabethe says Zimbabwean companies and South African investors should enter into partnerships that promote local production in order to reduce trade deficit between the two nations. Addressing a South Africa-Zimbabwe business conference,… Read More
Steelnet creditors to receive payment next month
By Chipo Musoko, HARARE, October 9 (The Source) – Creditors of the collapsed manufacturing firm, Steelnet Zimbabwe, are expected to receive payment next month following the disposal of the company’s assets for close to $5 million, the company’s liquidator has said. “If everything goes according to… Read More
Zimglass resumes production of flint glass
GWERU, October 9 (The Source) – Zimbabwe’s sole glass maker, Zimbabwe Glass Industries (Zimglass) has resumed manufacturing flint glass used in bottling soft drinks, three years after suspending production, a company official said on Wednesday. Zimglass spokesperson, Dereck Sibanda told The Source that production of flint glass… Read More
Phoenix shares suspended from trading on ZSE
By Chipo Musoko, HARARE, October 3 (The Source) – The Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) on Thursday suspended Phoenix Consolidated Industries after the troubled plastic and steel company voluntarily applied for judicial management. “Phoenix Consolidated Industries Limited shares were suspended from trading with immediate effect after… Read More
ZANU-PF wants more engagement with business community
By Chipo Musoko, HARARE, September 3 (The Source) – ZANU-PF leadership on Thursday pledged to engage more with business to turn around Zimbabwe’s struggling economy, as it struggles to convince investors of its economic message. The economy is still emerging from a decade of economic decline… Read More
Industry in ‘intensive care’ as capacity utilisation declines
By Chipo Musoko, HARARE, October 2 (The Source) – The average capacity utilisation in the manufacturing sector has declined to 39.6 percent from 44 percent last year mainly due to working capital constraints facing industry, according to a survey by the Confederation of Zimbabwe Industries… Read More